एकै परिवारका ६ जनाको दा’हसंस्कार , हे भगवान यो कस्तो पिडा दियौ ? - Like For Nepal
एकै परिवारका ६ जनाको दा’हसंस्कार , हे भगवान यो कस्तो पिडा दियौ ?
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ खर्पेलगाउँमा पहिरोले ज्यान गुमाएका एकै परिवारका ६ जनाको बुधबार दा’हसंस्कार गरिएको छ ।अविरल वर्षापछि मंगलकार घरमाथिबाट आएको प’हिरो परेर एकै परिवारका ६ जनाको मृ’त्यु भएको थियो ।l आइतबार रातिदेखि आएको लगातारको वर्षाले मंगलबार राति घरमाथिबाट आएको प’हिरोले धाविरे
शाही घर पु’रिँदा शाहीसँगै कलबहादुर शाही, आशा शाही र उनका ११, ५ र ३ वर्षीय छोराको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । यो पनि पढनुहोस्।,सप्तरीमा करेन्ट लागेर एकै परिवारका चार जना घा’इते भएका छन् । करेन्ट लागेर घा’इते सबैको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा उपचार भइरहेको छ । घरको छतमा रहेको होर्डिङ बोर्ड हावाले झारेपछि बिजुलीको तारमा छोइएको थियो
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा ४० वर्षका शिव नारायण साहलाई करेन्ट लागेको थियो । साहलाई छुटाउन जाँदा उहाँकी श्रीमती सन्तोषी साह, भाउजू राजकुमारी साह र भतिजा रक्षित साहलाई पनि करेन्ट लागेको हो । होर्डिङ बोर्ड हटाउन जाँदा साहलाई करेन्ट लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै,,कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा बेवारिसे श’व फेला परेको छ । मृ’तकको पहिचान नखुलेको र शव पो’स्टमा’र्टमको लागि शिवराज अस्पताल बहादुरगंज पठाइएको बिष्टले बताए । विहिबार विहान साढे ६ बजे प्रहरीले थाहा पाएपछि घ’टना स्थल पुगेको हो । गाउँपालिकाको वडा न. ५ बनगाइको बाटो नजिकै रहेकोे खाल्डोमा मृत अवस्था फे’ला परेको ईलाका प्र’हरी कार्यालय गणेशपुरका प्रहरी निरीक्षक रण बहादुर बिष्टले जानकारी दिए । सो घट’ना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्र’हरीले बताएको छ ।
Prevहेर्नुहोस् अझै पनि यी ठाउँमा हाँडीघोप्टे वर्षा हुने : सचेत रहन आग्रह ! –
Nextभाइरल झाक्रीको काम गर्दा को मनै रुवाउने दृस्य बुढा हजुरबुबा झाक्रीको कि’रिया गर्दै ( हेर्नुहोस भिडियो सहित)
को-रोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि देखियाे को-रोनाको नयाँ भेरियन्ट, यस्ताे रहेछ लक्षण !
यी देशमा प्रवेश निषेध गर्ने तयारी, जाने तयारीमा हुनु हुन्छ भने ? पढ्नुहोस्
नेपालमा फेरी लकडाउन हुदै, भर्खरै आयो यस्तो खबर
महिलाको सौन्दर्य बढाउन यस्तो सम्म गरिन्छ, थाहा पाउँदा तपाईलाई छक्क पर्नुहुनेछ !
जन्मीएको ७ दिनमै बुवा बितेर टुहुरो भएका भिम रावलको यस्तो छ भावुक कहानी !